Ukuthenga kwi-Intanethi kunye nokuziphatha ngokuhambisa ngenqanawa kwi-2015 | Martech Zone
UkuThengwa kwe-Intanethi kunye nokuziphatha okuThumelayo kuguquka ngo-2015
NgoLwesine, uJuni 4, 2015 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Ndinyukile eChicago e I-IRCE kwaye wonwabele umsitho. Umboniso mkhulu kangangokuba andiqinisekanga ukuba ndiza kuwenza wonke lo mcimbi unikwe iintsuku ezimbalwa ndilapha- kukho iinkampani ezimangalisayo esiza kubhala ngazo. Ukugxila okungagungqiyo kwiziphumo ezilinganisiweyo ngumbonisi ngamnye apha kuyahlaziya. Ngamanye amaxesha xa ndisiya kweminye iminyhadala yentengiso, ezinye zeeseshoni kunye nokugxila kubonakala ngathi kuyehla kwiinkampani ngenene ukufumana iziphumo zemali.
Izolo bendizimase ingxoxo ye-UPS kunye UGian Fulgoni, uSihlalo kunye noMququzeleli weComScore apho i-UPS ikhuphe khona unyaka UPS Pulse yeShopper ekwi-Intanethi (La maxwebhu makhonkco aphezulu ngasekunene) kwaye isifundo sibonisa ukuba utshintsho olunamanani aphindwe kabini kwindlela yokuziphatha yokuthenga kwi-Intanethi iyaqhubeka nokuba yinto eqhelekileyo.
Amagqabantshintshi avela kwi-UPS Pulse ye-Intanethi ye-Intanethi
Ukuthenga okuncinci kunye neNdawo - Entsha kufundo lwalo nyaka, abathengi abaninzi (iipesenti ezingama-93) bathenga kubathengisi abancinci. I-61% ithengiwe kwezi ndawo kuba zinikezela ngeemveliso ezizodwa, i-49% ayifumananga nto ibiyifuna kwiivenkile zesintu kwaye i-40% ifuna ukuxhasa amashishini amancinci.
Ukuthenga kwiHlabathi liphela Ukongeza, i-40% yabathengi bathenga kubathengisi abasebenza ngaphandle kwe-US, phantse isiqingatha (49%) benika ingxelo ukuba benze njalo ukufumana amaxabiso angcono, kwaye i-35% ithe bafuna izinto ezingafumanekiyo kwiivenkile zase-US.
Amandla eendaba ezentlalo -Abathengi abaninzi banxibelelana nezinto zokuthenga ngokusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo kunye ne-43% yokuxela bafumanisa iimveliso ezintsha kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni. I-Facebook lelona jelo linempembelelo kodwa abathengi bakwamkela iindawo ezijolise ekubonakaleni njengePinterest.
Intengiso yedijithali -Ukuthengisa kuyaqhubeka ukuvela njengoko abanye abathengi be-Intanethi bejonga ukusebenzisa ubuchwephesha beselfowuni kwivenkile: i-33% ifumana iilebheli ezishelfini zekhompyuter, i-29% ithe bayakuthathela ingqalelo ukuphuma kweselfowuni, kwaye i-27% ithe bavulekile ekusebenziseni izikrini zokuchukumisa ukufumana ulwazi, ukuthenga okanye ulungiselele ukuhanjiswa.
Ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala Ukuhanjiswa simahla kuhlala kuyeyona nto ibalulekileyo ngexesha lokuphuma ngokuya kwi-77% yabathengi abakwi-Intanethi. Ngaphezulu kwesiqingatha (i-60%) bongeze izinto kwinqwelo yabo ukuze bafaneleke ukuhanjiswa simahla. Olu phononongo lubonelela ngengqondo yokunceda abathengisi bonyuse ukuthengisa- i-48% yabathengi abakwi-Intanethi bathi bathumela izinto evenkileni, nge-45% yabo bathi bathenga izinto ezongezelelweyo xa bethatha iiodolo zabo.
Ubunzima-Free Ukubuya - Ngokwengxelo, kuphela ngama-62% abathengi abonelisekileyo yinkqubo yokubuyisa i-intanethi: ama-67% aphonononge umgaqo-nkqubo wokubuyisa umthengisi ngaphambi kokuba athengwe, ama-66% afuna ukuhanjiswa simahla, ama-58% afuna ukungabinangxaki “akukho mibuzo ibuzwayo” Buyisela umgaqo-nkqubo, kwaye iipesenti ezingama-47 bafuna ukubhalwa ngokulula ukuprintwa kwelebheli.
Ukuhanjiswa okunye - Xa kuthelekiswa nokufunda konyaka ophelileyo, abathengi abaninzi bavulekile ukuba bakhethe ezinye iindlela zonikezelo. Kwi-2014, i-26% ithe bakhetha ukuba iiphakeji zisiwe kwezinye iindawo ngaphandle kwamakhaya abo, kulo nyaka inyuke yaya kwi-33%. I-UPS ivavanya iveni yakho yokutshixa inkonzo kwezinye iidolophu ngoku.
Ukuthatha ngaphakathi kwiVenkile Phantse isiqingatha (i-48%) yabathengi abakwi-Intanethi basebenzise iinqanawa ukugcina kunyaka ophelileyo, kwaye iipesenti ezingama-45 zabo bathengi bathengile xa bethenga online.
Umxholo omnye wengxoxo owawunomdla kakhulu kum: abathengi tshintsha amajelo okuthenga phakathi kweselfowuni kunye nedesktop. Amanqanaba okuguqula iselfowuni asala kakhulu kwi-desktop. Uqikelelo ngamaqondo okuguqula iselfowuni nge-0.5% ukuya kwi-3% yedesktop yenqanaba lokuguqula. Oko akuthethi ukuba umthengi unjalo ayiguquki… Bahlala betshintsha phakathi kwezi zimbini. Ngapha koko, uMnu Fulgoni uxele ukuba ubungakanani bendawo enkulu yokujonga iifowuni ezinje nge-iPhone 6+ inokuba noxanduva lokonyuka okuncinci kubungakanani benkcitho yeselfowuni kunye namaxabiso okuguqula.
Abathengisi kufuneka baqhubeke nokuqhubela phambili usetyenziso lwabo lweselfowuni, njenge-38% eneselfowuni kodwa abangayisebenzisiyo ekuthengeni imifanekiso yemveliso ayinkulu okanye icace ngokwaneleyo, kwaye i-30% ithe kunzima ukuthelekisa iimveliso.
I-UPS 2015 Pulse yephepha elimhlophe le-Shopper-Ekhaya
I-2015 ye-UPS Pulse ye-Online Shopper infographic-Ekhaya
U-2015 we-UPS Pulse yesifundo esilawulayo se-Intanethi se-Intanethi-Ekhaya
tags: FacebookUkuhanjiswa kwamahhalakuthengwa kwi intanethiTwilleyUkuhambisa ngenqanaweIUPS
Okokugqibela -Isixhobo sokugcina sinolwazi ngeNtengiso yezeNtlalontle!
Ukurekhodwa okumangalisayo kwe-ICRE kwi-Ink Factory Studio
Sep 14, 2015 kwi-8: 51 AM
Enkosi kakhulu ngokwabelana ngolu lwazi lukhulu kunye namanani!